Fanokafana ny Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line Nahemotra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFanokafana ny Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line Nahemotra
14 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, PHOTOS, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Faritra Marmara, Metro, TORKIA
imamoglu mecidiyekoy mahmutbey nanao fizahana teny amin'ny zotra metro
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao fanadihadiana tany amin'ny Station Murtidiyeköy-Mahmutbey Metro Line. Ny filazan'izy ireo fa mikasa ny hametraka ny tsipika amin'ny 19 Mey izy ireo, saingy tsy mamela izany ny fizotry ny valan-jaza, hoy i İmamoğlu, "dia nisy fifanarahana natao tamin'ny orinasa vahiny iray ho an'ny rafitra famantarana famantarana ny tsipika. Mampalahelo fa ireo mpiasa ao amin'ity orinasa ity, izay manao ny asa eto, dia avy amin'ny foibe Espaniola ary avy amin'ny foibe any Espana. Mampalahelo fa tamin'ny fizotran'ny Covid dia tsy nahavita nanatontosa ny fotoam-pivavahana izy ireo nanomboka ny 3 martsa teo ”. Nilaza i İmamoğlu fa: "Malahelo an'io tsy fahombiazana io aho fa tsy vahaolana io. Hovantsika haingana izany. ”
Ekrem İmamoğlu, Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Metropolitan (IMM) dia nanao fisafoana teny amin'ny Station Murtidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, izay eo am-panamboarana azy. Olom-pirenena izay nahazo ny fampahafantarana fa ho tonga eny amin'ny tobin-dehilahy i Imamoglu dia maneho fampisehoana fitiavana amin'ny filohan'ny IMM avy ao an-tsangam-bato. Namaly ny tehaka vahoaka, i Imamoglu dia nidina tany amin'ny rihana makarakara. Ny fampahalalana momba ny teknolojia momba ny sanganasa andalana dia nomena an'i inmamoğlu nataon'i Pelin Alpkökin, Lehiben'ny departemantan'i IMM Rail. Alpkökin, ny tsipikao, Beşiktaş ary Kabataş Nozarainy ny vaovao fa nitohy tamin'ny weremamoğlu ny asa arkeolojika tao amin'ny gara.
"AZO ATSIKA NY FAHAGAGANA NY ASA"
Rehefa avy nanombatombana ny famelabelarana nataon'i Alpkökin, dia hoy i İmamoğlu: “Misy orinasa vahiny iray eto amin'ny subtrakontrooro eto. Ny rafi-panoherana dia efa nifanarahana tamin'io firehana io. Mampalahelo fa ireo mpiasa ao amin'ity orinasa ity, izay manao ny asa eto, dia avy amin'ny foibe Espaniola ary avy amin'ny foibe any Espana. Mampalahelo fa tamin'ny fizotran'ny Covid dia nanjary tsy afaka nanome an'io serivisy io izy ireo ny 3 martsa. Tsy maintsy nandao an'io toerana io izy ireo ary niverina tany amin'ny fireneny. Nandritra ny 2,5 volana latsaka dia tsy afaka mahazo an'io serivisy io izahay. Misy mpiasa an-toerana sasany manao io serivisy eto io, araka ny filazan'ny orinasa mpiambina ny serasera. Saingy mazava loatra fa tsy fahaizana firy io. Araka ny hitanao izao dia feno daholo ny tobim-piangonana. Amin'ny tontolo iainana toy izany, ny tsy fahampian'ny farany dia manao sonia. Ny lafiny teknika dia tena zava-dehibe amin'ny raharaha tahaka itony. Izany hoe, tsy azo atao ny misokatra eto raha tsy misy ireo fitsapana sy fomba fiasa ireo. Miandry azy isika izao; mitohy ny fifandraisana. Samy eo amin'ny orinasa mpanamboatra ary manohy ny serasera mba hitondrana izany haingana araka izay azo atao. Ezaka mafy isika. Koa satria tsy misy valiny mazava, tokony ho 80 andro, ny fanadinana mandritra ny 90 andro no tokony handalo eto raha resaka sonia. Izahay dia miezaka mafy amin'ny fanavaozana ara-dalàna ary hitondra ireo mpiasa eto avy any Spain. Raha vantany vao manomboka isika dia te-hahazo serivisy famantarana ny lisitry ny lisitry izahay ary omena ity zotra ity ho an'ny mponin'i Istanbul haingana. Raha tsy izany, hanokatra ny volana Mey izahay, dia nisy hetsika mampalahelo izay. Manana tranonkala fananganana sy tetikasa hafa izahay izay niainan'i Covid olana toy izany. Miala tsiny amin'ity halatra ity. Tsy varotra tsy mitongilana; hofoantsika haingana izany. ”
TOROHY INTENSIFIDY ETO ANY BALCONES
Taorian'ny fanambarana dia i İmamoğlu, izay nidina tany amin'ny lampihazo miaraka amin'ilay delegasiona niaraka taminy, dia niaraka tamin'i Mevlüt Öztekin, ben'ny tanànan'i Kağıthane. Nameno ny fandinihana teny amin'ny toeram-piantsonana i İmamoğlu dia nandao an'i Nurtepe niaraka tamin'ny fampahafantarana ireo olompirenena izay nanangona tamin'ny balconies tamin'ny teny hoe: "Misaotra anao izahay ry Filoha, misaotra."
Mecidiyeköy - Lalana Metro Mahmutbey, Gudang - Faritra fikojakojana sy lalam-pifandraisana momba ny trano fanatobiana trano…
Fanamarihana Tender: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro faritra malemy sy toerana fitehirizam-bokatra, trano fanatobiana trano…
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Construction Work Tender Nahemotra ny 16 aprily
Tender Announcement: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Rail fitaterana ho an'ny rafi-pitateram-bahoaka…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line, Toeram-panobiana trano fanatobiana trano ary tetik'asa fampifandraisana trano fanatobiana trano…
Mecidiyeköy - Toeram-pivarotana Line Mahmutbey Metro - Faritra fikojakojana sy fantsom-pifandraisana trano…
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line Warehouse - Faritra fikolokoloana sy fantsom-pifandraisana trano…
Tender ho an'ny tetikasa Metro Line Mecidiyeköy-Mahmutbey hatao amin'ny volana Septambra
Ny làlan'ny metro Mecidiyeköy-Mahmutbey dia hampisy vidiny ny tetikasa
Mecidiyeköy - Ny metro metmalana Mahmutbey dia hotontosaina amin'ny 2017
Mecidiyeköy Mahmutbey metatra fiarandalamby
Ny fifanarahana fifanintsanana metro Mahmutbey-Mecidiyeköy dia nosoniavina
Ny tsy fahampian-drano noho ny fanorenana ny metro Mecidiyeköy-Mahmutbey
Selluka Certificate dia homena ireo orinasa izay mifanaraka amin'ny fitsipi-pitondran-tena any İzmir
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro ho an'ny fahazoana mitondra fiara no natao
Ny tsy fahampian-drano 14 ora tao Istanbul no anisan'ny sehatry ny fametrahana ny metro Metcol Meekidiyeköy-Mahmutbey
Kabataş Rahoviana no hisokatra i Mecidiyeköy Mahmutbey Metro Line?
Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ho avy haingana